Mpamatsy BBQ Mixer BBQ mora vidy sy orinasa | YiZheng
Masinina afangaro amin'ny zezika BB dia ampiasaina hampihetsiketsika tanteraka sy hamoahana tsy tapaka ny akora amin'ny fizotry ny famokarana zezika. Ny fitaovana dia novelarina amin'ny famolavolana, ny fampifangaroana ary ny fonosana mandeha ho azy, na ny fampifangaroana aza, ary tena azo ampiharina.
Inona no masinina mixeur BB-pupuk?
BB Masinina mpanamory zezika dia fitaovana fampidirana amin'ny alàlan'ny rafitra fampakarana sakafo, miakatra sy midina ny fitoeran-tsolika mba hamahanana ireo fitaovana, izay alefa mivantana ao anaty mixer, sy ilay mixeur an'ny zezika BB amin'ny alàlan'ny mekanisma anatiny manokana sy rafitra telo-miavaka amin'ny fampifangaroana sy ny vokatra. Rehefa miasa, mifangaro mihodina arakaraka famantaranandro, fitaovana manodina familiana arakaraka famantaranandro, mijanona ao anaty fitoeram-bokatra mandritra ny fotoana fohy ny zezika, avy eo midina avy eo amin'ny vavahady.
Ny milina zezika BB dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Inona no ilana ny Mixer BBQ BBQ?
BB Masinina mpanamory zezika maharesy ny fifangaroan'ny chromatography sy ny fizarana fizarana vokatry ny ampahany samihafa amin'ny akora sy ny haben'ny sombintsombiny, ka manatsara ny fahamarinan'ny fatra. Izy io koa dia mamaha ny fiantraikany amin'ny rafitra ateraky ny fananana ara-nofo, ny fihoaram-pefy mekanika, ny tsindry amin'ny rivotra, ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny toetrandro mangatsiaka sns. Izy io dia manana ny toetran'ny haingam-pandeha, haingam-pandeha, fiainana lava, sns., Izay safidy mety indrindra amin'ny zezika BB ( mifangaro) mpamokatra.
Fampiharana ny Mixer Fertilizer BB
ny BB Masinina mpanamory zezika ampiasaina amin'ny zezika biolojika, zezika mitambatra ary eo ambanin'ny mpanangona vovoka famokarana herinaratra, ary azo ampiasaina amin'ny metalyurgie, fitrandrahana, akora fananganana ary indostria hafa koa izy io.
Ny tombony azo avy amin'ny mixer an'ny zezika BB
(1) Manarona faritra kely (25 ~ 50 metatra toradroa) ny fitaovana ary ambany ny fanjifana herinaratra (latsaky ny 10 kilowatts isan'ora ny herin'ny fitaovana rehetra).
(2) Ny motera lehibe dia vita amin'ny vy tsy misy indostrialy, ary ny rafitra fanaraha-maso dia mety ho an'ny fepetra asa henjana isan-karazany.
(3) Mampiasà fiarovana seismika ambaratonga roa sy teknolojia fanivanana sehatra maro, fandrefesana marina.
(4) Fampifangaroana fanamiana, fonosana tsara tarehy, tsy misy fisarahana fitaovana amin'ny fizotran'ny fonosana, fanitsiana tsy misy hatak'andro ny fangaro amin'ny 10-60kg, fandresena ny fisarahan'ny akora lehibe amin'ny famokarana sy ny fonosana.
(5) Ny actuator dia mandray ny drive pneumatika, ny fahana roa amin'ny sehatra, ny refy tsy miankina ary ny fandrefesana ny fitaovana isan-karazany.
Fampisehoana horonantsary Mixer BB
Safidy maodely mixer an'ny zezika BB
Mixer zezika BB manana famaritana isan-karazany, miaraka amina famoahana 7-9T, 10-14T, 15-18T, 20-24T, 25-30T sns sns; araka ny akora mifangaro dia misy karazany 2 ka hatramin'ny 8 ny fitaovana.
Modely ho an'ny fitaovana
Fahafahana mamokatra （t / h）
＜ 85% (tsy misy fanala)
Teo aloha: Masinina mixeur disc
Manaraka: Mixer zezika mitsangana
Fampidirana Inona no masinina mpamaky ranjo rojom-bary? Ny Double-axle Chain Crusher Machine Fertilizer Crusher dia tsy natao hanapotehana ny vongan-pamokarana zezika organika fotsiny, fa ampiasaina betsaka amin'ny akora simika, fitaovana fananganana, fitrandrahana ary indostria hafa, amin'ny alàlan'ny lozam-pifamoivoizana avo lenta MoCar. Ny m ...
Fampidirana Inona ny masinina mpamaky vovoka rojom-bary? Ny Vertical Chain Fertilizer Crusher dia iray amin'ireo fitaovana fanamoriana matetika ampiasaina amin'ny indostrian'ny zezika. Izy io dia manana fahaiza-mampifanaraka matanjaka amin'ny fitaovana misy rano avo lenta ary afaka misakafo tsara nefa tsy manakana. Miditra avy amin'ny f ...